ယဉ်ကျေးမှု နှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ယဉ်ကျေးမှု နှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်….
ယဉ်ကျေးမှု နှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်….
Posted by alinsett on Mar 4, 2012 in Arts & Humanities, Critic, Myanmar Gazette, Short Story | 14 comments
အလင်းဆက် ၏ အတွေး ဆောင်းပါး
လူမျိုးတစ်မျိုး၏ အမူ အကျင့်နှင့်..ယဉ်ကျေးမှုသည်…ခေတ်ကို လိုက်၍ ပြောင်းလဲ.သွားသင့်ပါသလား…??
ပြောင်းလဲ.သင့်သည်..ဟု..ထင်မြင်လျှင်…ဘယ်လိုပြောင်းလဲသင့်သလဲ….ဟု ထပ်မေးစရာ ရှိပါသည် ။
အတိတ်ဆီမှ အမူအကျင့် ၊ ဓလေ့ စရိုက် များ သည်…မမှန်ကန်ဘူး…၊ မသင့်တော်ဘူး..ဆိုလျှင်
ပိုကောင်းသော..၊ ပို၍ ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော…အမူအကျင့် ဓလေ့ စရိုက်များဖြင့်..အစားထိုးပြောင်းလဲ..မည်ပေါ့လေ…။
အကယ်၍……….အတိတ်ဆီမှ အမူအကျင့်ဟောင်း..၊ဓလေုစရိုက်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဟောင်းများသည်…
သဘာဝကျကျ ဖြစ်နေလျှင်..၊ သင့်လျော် မှန်ကန်နေလျှင်..၊ အမှား တစ်စုံတစ်ရာ မရှိလျှင်..တော့……
ခေတ်သစ်..၊ ခေတ်ပေါ်..အမူအကျင့် ၊ ဓလေ့စရိုက်များဖြင့်…အစားမထိုးသင့်..ဟု..ကျွန်တော် ခံစားမိပါသည် ။
ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာ ကြီးမား ခမ်းနာ ခဲ့ သော …မြန်မာ များအနေဖြင့် စဉ်းစား တွေးတော့ စရာမျာ..ရှိလာပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသည်…သဘာဝတ၇ားက ချစ်မြန်နိုးသော …( သို့ မဟုတ်..သဘာဝ တရားကိုချစမြတ်နိုးသော…နိုင်ငံ )
စီးပွါးရေး ၊ နိုင်ငံရေး…ပြိးတော့….ပညာရေး….စသော အရေးကိစ္စများတွင် အခြားနိုင်ငံများထက် …
ယဉ်ကျေးမှု..နှင့် ဓလေ့စရိုက်များ..ကတော့….ဘယ်လိုမှ မနိမ့်ကျနိုင်ပါ ။
ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ…နန်မြို့ ရိုး..ရှိသည် ။
သနပ်ခါး ရနံ့ရှိသည် ။
မုတ်သုန်ရာသီ.. နှင့် သဘာဝတော..များ..ရှိသည် ။
ဘုရားစေတီ..နှင့် လှူတန်းပေးကမ်းမှုများ..ရှိသည် ။
အရှက်တရား ကြီးမား၍ သိမ်မွေ့ စွာ…ရိုးသား ဖြူစင်သော..
မြန်မာ အမျိုးသားကလေးများ….. ၊ မြန်မာ အမျိုးသမီးကလေးများ………..ရှိခဲ့ပါသည် ။
အကျင့်သီလ မြင့်မြတ်သော…၊ ကိုယ်ကျင့် တရား စင်ကြယ်သော…မြန်မာ အမျိုးသမီးကလေးများ ၊
မြန်မာ အမျိုးသားကလေးများ….ရှိခဲံ့ပါသည် ။
( ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ စွာ ၀တ်စား ဆင်ယင်တတ်သော ၊ သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားကလေးဖြင့်..
တင့်တယ် လှပ..သော အမျိုးသမီးကလေးများ……အသေအချာ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။
ထို့ အတူ…… တိုက်ပုံ အကျီင်္ င်္ ၊ ပုဆိုး များ ၀တ်ကာ…၊ ကတ္တီပါ..ဖိနပ်ကိုစီး၍ီ
က္ဏနြေ္ဒ တည်ကြည်စွာ..ခံ့ညားသော…အမျိုးသားကလေးများလည်း..အသေအချာ ရှိခဲ့ဖူးပါသည် ။
တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ…ယဉ်ကျေးမှုများ ကူးလူး.ဆက်ဆံရာတွင်…..
ကောင်းမွန်သော…အစဉ်အလာများကိုသာ လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ဖို့ …လိုပါသည် ။
ပေးသူ…ကတော.့…….( သူတို့ကျင့်သုံးခဲ့သော ဓလေ့စရိုက် ၊ အမူအကျင့်များကိူ )
အကောင်းဆုံး…ဟုယုံကြည်ကာ… ပေးကမ်းလိမ့်မည် ။
ယူသူသည်..( သို့ မဟုတ်…အတုယူသူသည်…..) ယူတတ်ဖို့ / အတုယူတတ်ဖို့ လိုပါသည် ။
ကိုယ့်လူမျိုး.၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဆန့် ကျင်သော.၊
အမှန်တရား.၊ ကိုယ်ကျင့်တရား..၊ သိက္ခာ တို့ ဖြင့် မနီးစပ်သော….
အရာများကို မယူမိဖို့ …လိုပါသည် ။
ရင် ဖုံး အကျီ င်္၊ ချိတ်ထမီ..ဖြင့် …. ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ လှသော….
မြန်မာ အမျိုးသမီးများမှ ( အတိတ် မျိုးဆက်များမှ )
ဂျင်းဘောင်းဘီ တိုတိုကပ်ကပ်၊ လည်ဟိုက် ၊ရင် ပေါ်…. ၊ ခါး ပေါ်သော..ကိုယ်ကျပ်အကျီ င်္
ဆံ ပင် နီကြောင်ကြောင်.များဖြင့်…၀ိုင်.သောက်တတ်သော..အမျိုးသမီးတချို့့
ပုဆိုး တိုက်ပုံ ၊ ကတ္တီပါ…ဖိနပ်စီးကာ…က္ဏနြေ္ဒ တည်ကြည်သော..
(အတိတ်မျိုးဆက် ဆီမှ ) ဆင်းသက်လာသော…
ဘောင်းဘီ ကျပ်ကျပ် ၊ ဆံပင်ရှည်.ရောင်စုံများ..ပွ.လို့၊
ထောင်လို့ ….။ တစ်ချို့ ဆိုလျှင်….ဘောင်းဘီကို တင်ပါး တစ် ၀က်လောက်ထိ
အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို… တစ် ၀က်လောက် ဖော်
၀တ်တတ်သော.. ယောကျာ်း ကလေးများ…ရှိနေပြီ ။
အတိတ်ဆီမှ…..ယဉ်ကျေးမှုသည်..မှန်သလား. .. မှားခဲ့သလား..။
မှားခဲ့လို့ယခုလို ပုံစံများဖြင့် အစားထိုး ပြောင်းလဲ ပစ်လိုက်တာလား .။
ကျွန်တော် သေချာ မဝေခွဲတတ်ပါ ။
သို့ သော်…ကျွန်တော် သေချာ သိထားသည့်..ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကတော့…..
အတိတ်ဆီမှ….ယဉ်ကျေးမှု.၊ ဓလေ့စရိုက် ၊ ဟန်ပန်များသည်….အလွန်ပင်… အမြင် အေးချမ်းခဲ့ပါသည် ။
ရိုးသား ဖြူစင်..၊ ကြည်လင် သန့် ရှင်း ခဲ့ပါသည် ။
ကျွန်တော်တို့ချစ်သော…ဘိုးဘေးများ…၏ ဓလေ့ စရိုက်များ..နှင့် အမူအကျင့် များကို ..
အတိတ်ဆီမှ…ယဉ်ကျေးမှုကို..ပြန်လည် တမ်းတ မိသောအခါ…
အနာဂတ် မှာ လာမည့် ………..ယဉ်ကျေးမှု..အတွက်…
ကျွန်တော် ဆုံး ဖြတ်ချက် တစ်ခု….ချ မိပါတော့သည် .။
အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ဆီကို….မှန်ကန်သော ၊ ကောင်းမွန် မြင့်မြတ်သော……ယဉ်ကျေးမှု ၊ ဓလေ့စရိုက်များကိုသာ..
လက်ဆင့်ကမ်း ပေးခဲ့ပါမည် ။
* စကားစဉ်ကို ပြန်ချုပ်ပါမည် ။ *
၁ ။ ။ အတိတ်မျိုးဆက် ဆီမှ….
လက်ဆင့်ကမ်းပေးထားခဲ့သော… ယဉ်ကျေးမှု .၊ ဓလေ့ စရိုက်များသည်…
အလွန် ချစ်စရာကောင်းပါသည် ။
၂ ။ ။ ပစ္စုပ္ပန် မျိုးဆက် လက်ထက်တွင်..
.ဖြူစင်ခဲ့သော.၊ ကြည်လင် ရှင်းသန့် ခဲ့သော..
ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာသည်……အေ၇ာင်များ.စွန်းထင်းပေကျံ လုလု
ဖြစ်နေချေ..ပြီ ။ ( ကျွန်တော့်အမြင်သာ ဖြစ်ပါသည် ။)
၃ ။ ။ အနာဂတ် ၏ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ၊ ဓလေ့စရိုက်များကိူ..
ပို၍ မြင့်မြတ်သော..၊ ပို၍ သန့် ရှင်း သော… ယဉ်ကျေးမှုများကိုသာ…
ကျွန်တော်တို့ ..( ပစ္စုပ္ပ န် မျိုးဆက် .)တွင်…
( ကျွန်တော်) ခံစား၇ပါသည် ။
မတော်တရော်..၀တ်စားဆင်ယင်တတ်သော..လူငယ်ကလေး တစ်ချို့ ကို မြင်တွေ့ ပြီး..
မနေနိုင်တော့၍ ..ရေးမိသော …ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါသည် ။
မည်သူ့ ကိုမျှ…….ကဲ့ ရဲ့ ပြစ်တင်လိုခြင်းမရှိပါကြောင်း….လေးစားစွာ..အသိပေးခဲ့ပါသည် ။
ပုံလေးတွေ ကို ကြည့်ရတာ သိပ်အားမရဘူး ဖြစ်နေတယ် ။ နောက်တစ်ခါကြရင် ပိုပွင့်လင်းပါနော ။ ဟီဟိ
မှားခဲ့လို့ယခုလို ပုံစံများဖြင့် အစားထိုး ပြောင်းလဲ ပစ်လိုက်တာလား .။
သို့ သော်…ကျွန်တော် သေချာ သိထားသည့်..ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကတော့…..
ကျွန်တော်တို့ချစ်သော…ဘိုးဘေးများ…၏ ဓလေ့ စရိုက်များ..နှင့် အမူအကျင့် များကို ..
ကိုအလင်းစက် ချစ်သလိုကျနော်လဲ တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးပါတယ်ဗျာ။ကျနော်တို့ က
ပြောတာပါ။မျက်စိထဲမှာ ကန့် လန့် ကြီးဗျာ ခေတ်ကိုက……ဟူးးးး
တိုတိုဘဲပြောတော.မယ် ….အားလုံးသဘောတူတယ် ။
ရှည်ရှည်ပြောရင် အဘိုးကြီးမို. လေးများတယ်ထင်လိမ်.မယ်…….
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သဂျီးကတော. သိပ်သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူး …..။
အရီးလဲ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု ကို ဘဲ မြတ်နိုးပါတယ်။
လူပုံပေါ်မှာ တင့်တယ် တဲ့၊ ဂုဏ်ယူလို့ရတဲ့၊ အများလေးစားတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ကို ကမ္ဘာက သိလာနိုင်ဖို့ အမြဲစိတ်ဆန္ဒရှိပါတယ်။
လူအများ ညီနိုင်ရင်တော့ တို့တွေ ရဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ စရိုက် လေးတွေ ပြန်ပြီး အသက်ဝင်လာကောင်းပါရဲ့။
ထိုင်မသိမ်း နဲ့ တောင်ရှည် ဝတ်ရမည်ဟု မဆိုကြောင်းကိုတော့ အများ သိစေအပ်ပါသည်။ :-)
တက်တူးက.. မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုထဲ..အနောက်နိုင်ငံတွေထက်အစောထဲက ပါနေတာ..
ယဉ်ကျေးမှု..ကူးစက်ယှက်နွယ်တာပြောကြေးဆို.. မြန်မာ့ဆီကသူတို့ယူပြီး.. မော်ဒီဖိုင်းလုပ်ထားကြတာပါ…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့.. အရှိန်အ၀ါနဲ့.. တကမ္ဘာလုံးက အမျိုးသမီးတွေ.. မြန်မာ့အကျီ င်္ဝတ်စုံစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်..။
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုကို.. အနောက်နိုင်ငံတွေ သတိထားမိလာကြတယ်..။
မြန်မာတွေ.. မြန်မာ့ချိပ်..ပိုး.. ဆေးရေးထမိန်..စတာတွေ..နိုင်ငံတကာတင်ပို့ဖို့ပြင်ဆင်သင့်လှတယ်..။
ဖက်ရှင်ရှိုးတွေကို..အနောက်နိုင်ငံသူ..ပြင်သစ်သူ.. ဘိုမ.. ဘလူးဘလောင့်စ်တွေနဲ့.. လုပ်သင့်တာပေ့ါ..
ရန်ကုန်တင်မက.. ဘန်ကောက်.. စင်္ကာပူ..တိုကျို.. မိလာနို..နယူယောက်ဖွင့်သင့်..လုပ်သင့်တာပေါ့…
ယဉ်ကျေးမှု.. အ၀တ်အစား..ကမ္ဘာတန်းခြေဆန့်တော့ ဘာဖြစ်မယ်ထင်သလည်း..။
အဲဒီ အ၀တ်ဖက်ရှင်တခုထဲကတင်.. မြန်မာတမျိုးသားလုံး ဂျီဒီပီဝင်ငွေလောက် အသာလေးရသွားနိုင်တယ်..။
လူမျိုးတစ်မျိုး၏ အမူ အကျင့်နှင့်..ယဉ်ကျေးမှုသည်…ခေတ်ကို လိုက်၍ ပြောင်းလဲ.သွားသင့်ပါသလား…?? လို့မေးထားပြီး … ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းဘက်ကိုသာ … အလေးပေးပြောသွားတဲ့ အလင်းဆက်ရဲ့ ပို့စ်ကို နှစ်သက်ပါတယ် ။
အမူအကျင့်နဲ့ .. ယဉ်ကျေးမှုကို ပြောင်းလဲသင့်သလားဆိုလျှင်ဖြင့် … ပြောင်းလဲသင့်တယ်လို့ ဖြေမိမှာပါပဲ … ။ သို့သော် …အမြဲတစေ ပြောင်းလဲနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ …သူ့နေရာနဲ့သူ ချင့်ချိန်တွက်စလို့ ပြောင်းလဲမှုမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ် ။ ခေတ်မှီတာနဲ့ …. ခေတ်ဆန်တာ မတူဘူးဆိုတာလေး .. အတုယူလွယ်နေတဲ့ လူငယ်တွေကြား ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း သိစေချင်ပါတယ် … ။
မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းစို့ဟေ့လို့ …. ဒီဇိုင်နာများ ၊ စလက်ဗရက်တီများ တဖွဖွအော်ပေမယ့် … တကယ်တမ်း ထီထွင်လာတဲ့ ဖက်ရှင်ထဲ … မြန်မာဝတ်စုံပါလို့ နာမည်တပ်ပြီး .. ဘုန်းကြီးကျောင်းမ၀တ်သင့်တဲ့ …. ရိုးရိုးလေးနဲ့ ရိုင်းနေတဲ့ ၀တ်စုံများစွာပါဝင်ပါတယ် … ။ အင်တာဗျူးတွေမှာ သိပ်ကြိုက်လှပါတယ်လို့ပြော ၊ အမြတ်တနိုးဝတ်ဆင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ မင်းသမီးလေးတွေ … တစ်လနေလို့ … မြန်မာဝတ်စုံ တစ်ရက်ဝတ်ဖြစ်သလား … သိချင်မိပါရဲ့ …. ။
ကူးစက်လွယ် .. ပျံ့ နှံ့ လွယ်တဲ့ .. ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းထဲ …. မြန်မာ့ ဖက်ရှင် ကမ္ဘာမှာ.. ဘာကြောင့် တစ်ခေတ်မဆန်း ၊ နေရာမယူနိုင်သလဲဆိုလျှင် …. . ပြည်တွင်းဖြစ်ပိတ်စသားတွေကို .. အနောက်တိုင်းပုံစံမျိုးတွေနဲ့ … ရောယှက် အလှဆင် ချုပ်လုပ်လို့ … ကိုယ်ပိုင်သွင်ပြင် ပျောက်သွားရတယ်လို့ ထင်ပါတယ် … ။
ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းဖို့ … အမူကျင့်ကောင်းဖို့ ဆိုတာကတော့ …. သူများဝေဖန်တိုက်တွန်းမှုထက် ..ကိုယ်တိုင်ခံယူချက်ပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ် … ။ ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းဖို့ဆိုပြီး … ထိုင်မသိမ်းနဲ့ …ဘီးဆံပတ်ခေတ်ပြန်သွားရမယ် မဆိုလိုပါဘူး … သူ့နေရာနဲ့သူပါ … အလိုက်ထိုက် သင့်လျှော်ပါတယ် … ကိုယ့်ကိုယ် သူတပါး အထင်သေးလောက်အောင် … ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ် လူမုန်းခံရလောက်အောင် .. အမြင်မဆိုးဘူးဆိုလျှင်ပဲ … တော်သေးတယ်မှတ်တယ် … ။ လူဆိုတာမျိုးကလည်း ခက်သားလားနော် …. ကိုယ့်ဖက်ရှင် သူများ အားကျဖို့ထက် …သူများဖက်ရှင် အတုခိုးဖို့ပဲ … ၀ါသနာထုံနေကြတာဆိုတော့လည်း …… ……… နားလည်ရတော့ … ခက်နေပြန်ပြီ
ကားမော်ဒယ်ဆိုတာ ကော့ကန်ကားပြ၊ စက်ဆီကျပြရလို့ အခြားတော့ မပြောချင်ဘူး.. သို့ပေသိ မော်ဒယ်လ်၊ သရုပ်ဆောင်များ လုပ်မယ်ဆို စနစ်တကျ လေ့ကျင်ခန်းလုပ်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့် အချိုးအစားမှီ ကိုယ်ကာယအလှနဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အမူအယာ လုပ်ပြဂျပါလို့…. အခုဟာက ပုရိသအချင်းချင်း လက်တို့မျှချင်တောင် နိုင်ငံခြားသားအသိဆို ပြရဲဘူး…။
ဟုတ်တယ် ကိုကြီးကြောင်ပြောတာ တီချာထောက်ခံတယ်။
မနေ့ညက နေကောင်းပြီ တီဗီကြည်မည် ဆိုပြီး လေ့လာလိုက်တာ
Miss Tourism ရွေးပွဲနဲ့ တိုးပါတယ်။ လှကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့….
Exposure မများသင့်တဲ့နေရာတွေမှာ မျာနေတာကြည့်ပြီး စိတ်တိုမိတယ်။
ဥပမာ ကချင်တိုင်းရင်းသူ ဝတ်စုံလို့ ပြောပြီး ငွေမောင်းတွေသာ
ကြိမ်ကွင်းတွေသာ ဆင်မြန်းထားတယ် မဖော်ပြစေချင်တဲ့နေရာတွေကို
(ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အမူအယာ လုပ်ပြဂျပါလို့)…. ကိုကြီးကြောင်ပြောတဲ့
အတိုအဖော်တွေ ၀တ်ပြနေတယ်လို့ပဲ အကောင်းဘက်ကတွေးယူကြည့်လိုက်ပါတယ်
နောက်တီးနောက်တက် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ် …
ကိုပေ..ရေ.. ပုံတွေက…လွယ်လင့်တကူ ရှာလို့ ရထဲ့ …အင်တာနက်က ပုံတွေပါ ။ ကျွန်တော်..က ယောကျာ်း
လေးတွေ ရဲ့ ပုံတွေ တင်ချင်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ရှာလို့မရဘူး။
ပြိးတော့ ကျွန်တော် တင်ချင်တာက…..သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ် တွေ..ရဲ့ပုံ မဟုတ်ပါဘူး။
တကယ့် လက်တွေ့ အပြင်က…လူငယ်တွေ.ရဲ့ ပုံ့တွေ တင်ချင်တာ။ ကိုယ် တိုင်ကလည်း…လိုက်မရိုက်ရဲ…
ရိုက်ပြီူးသား အဆင်သင့်ကလည်း ..ရှာမရ..ဆိုတော့…လွယ်တဲ့ ပုံ့တွေပဲ..တင်ဖြစ်လိုက်တာပါ ။
ခပ်ကင်းကင်းရဲ့အကောင်းမြင် အတွေးလေး ကလည်း…အတော်တော့ စိတ် ဖြေသာ.၇ာ ရပါတယ် နော် ။
_____________________တီတီနု ရေ…အမြင်ချင်းတုပါတယ် ။
မမအိတုန်..ရေ.. အကျယ်တ၀င့် …ပြောဆို..သွားတာ သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော့်ပိုစ့်လေး..ကို ပိုပြည့်စုံသွားစေလို့ …တကယ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော် ။
မမတုန်ရဲ့ အယူအဆ ကိုလည်း..ကျွန်တော်.သဘောတူပါတယ် ။ တစ်သဘောထဲပါနော် ။
သူကြီး.ပြောသလိုပါပဲ.။ အခုတလောတော့..ဒေါ်စု ၀တ်ပြနေတဲ့မြန်မာ ၀တ်စုံတွေက တကယ် စိတ်ဝင်စားစရာ.ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒေါ်စုကို ကျေးဇူး အရမ်းတင်တာပါပဲ။
ရွှေတိဂုံ ဘုရား ပွဲတော်..ရောက်တဲ့ ည ကတောင်…အမေစု ချိတ်…ဆိုပြိး..ပြောရောင်းနေတဲ့့အထည်ဆိုင်တွေ တွေ့ ခဲ့ သေးတယ် ။
နာဂရ ချစ်သူ..၊ ကိုပေ.နဲ့ …အန်ကယ်ဂျီး တို့ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျ ။
စာဖတ်သူ အားလုံးကို ခင်မင် လေးစားလျက်………………….
kaung kg16 says:
ယဉ်ကျေးမှု ကတော့ တဖြေးဖြေး ဆုတ်ယုတ်လာတယ်နော်…..အတုမယူသင့်တာကိုလျှောက်ယူနေကျတာကိုး …အင်းပေါ့လေအဝတ်အစားတွေကလည်းအဆန်းတွေပေါ်လာတာဆိုတော့…..
ယဉ်ကျေးမှု့ ကိုေ၇းပြပေးတဲ့ အတွက်……..ကျေးကျေးနော်။